Ireo Mpanjonon’ny Filoha: Iza ireo Mitsangana Aorian’i Vladimir Putin? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2017 10:05 GMT
Tamin'ny volana Septambra, nankany amin'ny Farihin'i IImen ao Novgorod Oblast, eo amin'ny 500 kilaometatra avaratra-andrefan'i Moskoa ny filoha Rosiana Vladimir Putin sy ny Praiminisitra Dmitry Medvedev, ka tafahoana “tampoka” sy niara-nihinana lasopy tamin'ny vondrona “mpanjono ao an-toerana” iray. Ny fitsidihana, izay hita mazava ho nomanina mialoha, dia toa hita fa natao hanasongadinana ny fifandraisan'i Putin sy Medvedev amin'ny “olon-tsotra” ao Rosia, ary naparitaka be tamin'ny fampahalalam-baovaom-panjakana.
Nivanitika momba an'i Putin sy Medvedev tonga teo amin'ny vondrona mpanjono ao anatin'ny asan'izy ireo andavanandro ireo mpiserasera RuNet, saingy nanomboka tamin'ny Krismasy Ortodoksa tamin'ny herinandro lasa vao tena nanomboka ny vanitika: tamin'ny 7 Janoary, Voamarik'ireo blaogera fa ireo “mpanjono” hita sary tamin'ny fankalazana ny Krismasin'ny Filoha tao Veliky Novgorod ihany ireo teo amoron'ny Farihin'i IImen.
Rehefa adinon'izy ireo ny nanova ny ravaka.
Tahaka ny ahoana toko moa ireo mpanjono avy ao amin'ny farihin'i IImen rehefa tsy tsidihan'ny filoha tamin'ny kisendrasendra
Karazana anton'asa – mpanjonon'i Putin
Saingy ny hafa, tahaka ilay bilaogera Rustem Adagamov, kosa tsy nahita izay tena olana.
Hazavao ahy, inona no olana. Ireo mpanjono izay notsidihan'i Putin tamin'ny Septambra tao IImen ihany no nitsidika azy. Ka inona no olana?
Nanombatombana ireo mpiserasera RuNet marobe fa manampahefana avy ao amin'ny Sampam-piarovana Federaly (FSO), sampam-panjakana misahana ny fiarovana ny filoha sy ny manampahefam-panjakana hafa ireo olona mitsangana ao ambadik'i Putin ireo.
Ny mampiavaka ny mpanjonon'ny firenena
Ny mampiavaka ny mpanjonon'ny firenena 2
Fantatry ny manamboninahitra FSO iray vao tazanin-davitra ny manamboninahitra FSO iray. Tsy mahazo trondro amin'ny fintana ianao raha tsy eo ny manamboninahitra FSO.
Nanao tsoa-kevitra anefa ilay bilaogera Leonid Volkov, fa raha ny marina, dia mpikatroka avy ao Novgorod ireo “mpanjono” ireo. Nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny i Volkov fa tamin'ny harivan'ny 7 Janoary, nahita izy fa tsikariny i Larisa Sergukhina, ilay vehivavy hita tamin'ireo sary roa, mpandraharaha sady mpikatroka avy ao Novgorod.
Mampiseho ny dikan-tsoratra tamin'ny fankalazana ny Krismasy fa nandany fotoana tsara tamin'ny firesahana azy i Putin.
Nohavaozina ity lahatsoratra ity.